ဂျာမနီရှိမြင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာလူသိများခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်စိုးမြင်းလှိုင်းများကဲ့သို့အလားတူတစ်ခုခုကိုဖဲ့။ ဒါဟာတစ်ဦးမွေးနေ့သို့မဟုတ်အခြားအခါသမယတစ်နည်းပြလှည်းဆပ်ဖို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းတစ်မြင်း, သူ့ကလေးကများစွာသောကောင်းသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
သားသမီးများ၏ဝါသနာနှင့်ချွေတာ, ဒါပေမယ့်: Pony ကျက်စားရာနေရာတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်
ဤအခမ်းနားမြင်းများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သာကလေးတစ်ဦးအဘို့အမြတ်အစွန်းဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့အဘယ်သူမျှမကန့်ကွက်ဘာမှရှိပါသည်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာဆိုးဆိုးရွားရွားမကြာခဏတိရိစ္ဆာန်များမှရက်စက်မှုအပေါ်နယ်စပ်သောဤနည်းနည်းဖြင့်မြင်း၏သဘောထားအတွက်ပြစ်မှားမိသည်။ သူတို့ချွေတာ Pony လျှော့တွက်သူတို့နေရာအရပ်စာကျွေးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူ get ယုံကြည်သည်။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ချွေတာဟူမူကား, သို့သော်တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာသည်နှင့်အညီသူ့ရဲ့ကြင်နာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတစ်လူနေမှုလုပ်အားခလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းနည်း Pony ။
ငါ့ကိုမြို့သူတစ်ဦးဆိုပါစို့အစပိုင်းမှာသူအတွက်လုံလောက်သောမြေယာရှိသည်သို့မဟုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိဆွေမျိုးရှိပါတယ်, Pony ၏သဘောထားနှင့်အတူကိုင်တွယ်လို့မရဘူးမဟုတျကွောငျးဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကမြင်းလိုအပ်ချက်, ငါဆိုသည်အဖြစ်, နေရာ - မဟုတျဘဲပင်ကိုအနည်းငယ်။ ဒါဟာကျက်စားရာအတွက်ဆောင်းဦးရာသီမှနွေဦးကနေအသက်ရှင်ရန်လိုသည်။ ယင်း၏ Nordic အိမ်မှာကပင်ရှိဆောင်းတွင်းလအတွင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမတင်းကုပ်မြင်းပါ!
ဟုတ်ပါတယ်, ဆဲရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာအစာကျွေးခြင်း (30-35 Zentner မြက်ပင်ခန့်) လည်းနေရာချပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်တစ်ကျီကျွန်တော်တို့ကိုကြာပါတယ်။ ထိုအရာတစျခုအတော်လေးအခန်းထဲမှာလိုအပ်ပါတယ်! သင်တို့သည်လည်း Oats စာကျွေးခြင်းအချို့ quintals လိုအပ်ပါတယ်; ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးတည်းမြက်ပင်၏မြင်းနထေိုငျနိုငျပါဘူး။
တောင်မြင်းနွေးများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ထို့ပြင်အာကာသနေဆဲ, အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေဖို့ကောက်ရိုးဘို့လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှပင်သင်ရုံလတ်ဆတ်တဲ့ကောက်ရိုးပျံ့နှံ့ဖို့တည်ငြိမ်ပြီးတစ်ရက်ရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်ယူရှိသည်ကြောင့်, ဒီမှာဖြစ်စကားပြောဘူး။ မဟုတ်ရင်သင်မကြာမီတစ် shaggy, ungainly သားရဲတကောင်ရှိသည်ကြောင့်ထို့အပြင်မြင်း၏သိသာစောင့်ရှောက်မှုကိုလည်းဖြီးနဲ့ဟင်းဖြီးနှင့်အတူကြွလာ။
အချို့သောအခြေအနေများချိတ်ဆက်နေတဲ့တော်တော် Pony များ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူဒါ။ တစ်ဦးကြီးမားသောဥယျာဉ်ကဲ့သို့လုံလောက်မယုံပါနဲ့။ အနည်းငယ်ယုန်ဘို့, ဒါပေမယ့်မမြင်းများအတွက်မှာအကောင်းဆုံးကျေနပ်။
ဤသည်အသိပေးစာများသောအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေများနေသောကျေးလက်ဒေသခံများထက်မြို့နေထိုင်သူများအတွက်ပိုပြီးသက်ဆိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူတိုင်းပြည်၏ဧရိယာတှငျနထေိုငျ, ကျက်စားရာနဲ့လယ်ယာငှားဖို့သူ၏မြင်းလိုက်လျောညီထွေဖို့နည်းလမ်းရှာပေလိမ့်မည်။
ထို့အပွငျကမြင်းစျေးပေါမဟုတ်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ သင်တစ်ဦးအိုကျ, တစ်ဦး Shetland သို့မဟုတ် Norwegian Bokmålကိုဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျအကွောငျးကို 750 ယူရိုနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်ထဲမှာမျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ် - ထိုဖောက်, Ritt- နှင့်မော်တော်ယာဉ်တည်ငြိမ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး။ တည်ငြိမ်, သိုလှောင်မှု, ဇက်ကြိုးကိုမှီသည်, ကုန်းနှီး, ရထားနှင့်ပန်းပဲဆရာမှာခွာ၏ fogging လည်းရှိပါတယ်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်ဤအခက်အခဲများကျွမ်းကျင်လျှင်ထိုအခါမူကားသင်ဝယ်ယူနှင့်အတူချီတုံချတုံမဖြစ်သင့်။ တစ်ဦးစျေးပေါကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မြင်းဝယ်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံမယူကြ။ အများစုကကနောက်ကွယ်မှတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ဆိုးတတ်သို့မဟုတ်ကလေးကိုင်းရှိုင်းမဟုတ်ပါဘူး, တစ်ဦး biter, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်စေ။
ထို့အပွငျကသင်တစ်ဦးမြင်းမဝယ်ချင်သောအရာကိုရည်ရွယ်ချက်ကိုအောက်မေ့ရပါမည်။ ကလေးတွေနည်းပြများအတွက်လုံလောက်စွာအသေးဆုံး Shetys ။ သငျသညျစီးချင်လျှင်, သင် Icelandic သို့မဟုတ် Norwegian ဝယ်ဖို့ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားကအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. တဦးတည်းမီတာနှင့်အရာတစ်ခုခုကိုအမြင့်ရှိသည်။
သဘာဝအားဖြင့်, အ Pony သားသမီးများ၏ဝါသနာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမြင်းနှင့်အတူကလေးများအဖြစ်ပိုပြီးလှပ think ပုံရိပ်ကိုရန်ခဲယဉ်းသည်။ အဲဒီမှာနှစ်ဘီးတပ်ရထားကိုဆွဲဆောင်, နွေရာသီအတွက်စီးပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်စွတ်ဖားဖို့ဆောင်းရာသီတွင်ဆန့်နေသည်ပဲဖြစ်ဖြစ် - အမြဲတမ်းယောက်ျား၏သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ဥယျာဉ်တော်သူ, သငျသညျဥယျာဉ်မှဒီသေးငယ်တဲ့မြင်းကောင်းသောကိုသုံးနိုင်သည်။ ကကြီးတွေမြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်၎င်း၏ feed ကိုစားသုံးမှုပင်သာလွန်သည်နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။
ယခုသင်မြင်းဝယ်နိုင်ဘယ်မှာသိရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်၎င်း၏ display ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Pony အကူအညီနဲ့အတွက်ပူဇော်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်မဂ္ဂဇင်း။ တောင်မှသတင်းစာများအတွက်သေးငယ်တဲ့မြင်းများမကြာခဏရောင်းချဘို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နေကြသည်။
အငယ်ဆုံးကတော့မြင်းစီးနှင့်အတူပေါ်ရ။ အကောင်းဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနိမ့်ချောင်းကိုအတိုင်းအတာ၏ဒီမှာ Shetland Pony ကိုက်ညီကလေး၏အချိုးအစားတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်စီးနင်းမကြောက်ပေါ်ကြွလာနှင့်ပျော်စရာရှင်းမှရှေ့ဦးစွာ မှစ. ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမြင်းဆဲမိဘများသို့မဟုတ်တစ်စီးနင်းနည်းပြဆရာများကဖွင့်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၏သင်တန်း, သူငယ်များသူတို့သာလှုပ်ရှားမှုကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်တိရစ္ဆာန်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသင့်တယ်, တိရစ္ဆာန်များအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
အဆိုပါ5မှ။ အသက်အရွယ်ကြောင့်ထို့နောက် Vault တတ်၏။ ဤတွင်အဆုတ်အပေါ်တစ်ဦး bareback မြင်းပေါ်သေးငယ်တဲ့အနုပညာကိုအပိုင်းပိုင်းလေ့ကျင့်ရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကလေးတွေ playfully ကျသွားကြောက်ရွံ့ခြင်းမဆုံးရှုံးကြောင်း။
အဆိုပါ Vault များသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးသစ်သားထောက်ခံမှုအပေါ်ကျင့်သုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအုပ်စုတွင်ကလေးများအဖွဲ့ကဝိညာဉျကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်အုပ်စုတစ်စုမှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်ယူကြသည်။
အဆိုပါ9မှ။ သူငယ်၏အသက်အရွယ်သည်ယခုအခါထိုကဲ့သို့သောကုန်းနှီးနှင့်ဇက်ကြိုးကိုမှီသည်အတိုင်းမြင်းပြင်ဆင်မှုများနှင့်တိရစ္ဆာန်၏စောင့်ရှောက်မှုသိလာကြတယ်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး command ကိုသိရှိလာနိုင်အောင်အခုကျောက်ကပ်ဖြည်းဖြည်းသူတို့၏ကိုယ်လက်အတွက်ကလေးအားပေးအပ်ထားတယ်။ ဤသည်မကြာခဏ Long ကသင်ခန်းစာတွေကထောက်ခံသည်။
အကြောင်းကိုတစ်နှစ်ပြီးနောက်ထို့နောက်ကွန်မြူနတီအတွက်အတူတကွစီးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်အားထက်သန်မိဘများလည်းယခုအားဖြင့်ဤအားကစားလေ့လာပါ။ တကယ့်အပျြောအပါးအဘို့မြင်းပေါ်ဒါကြောင့်လာမယ့်အားလပ်ရက်။
မှန်ကန်သောသင်ယူ - သင်ယူမှုပျော်စရာသောကွောငျ့
မှန်ကန်သောသင်ယူ - ပြီးတော့လူတိုင်းအရာအားလုံးကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်
ကလေးမြားအတှကျအဆိုပါစံပြအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် | အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
အတူသူစိမ်းနှင့်အတူလိုက်ဘယ်တော့မှမ - သင်မပါပြောသင်ယူရန်ရှိသည်
စနစ်တကျလေ့လာသင်ယူ - Motivaton တိုးမြှင့်